अर्को सातादेखि देशभरको इन्टरनेट अवरुद्ध हुने ! « pennepal.com
अर्को सातादेखि देशभरको इन्टरनेट अवरुद्ध हुने !
Published On : 30 April, 2022 4:15 pm By :
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आगामी सातादेखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् । सेवा प्रदायकले विज्ञप्ति नै निकालेर अर्को सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
आगामी सातादेखि इन्टरनेटसहित टिभी सेवा प्रदायकहरूको सेवा पनि रोकिन सक्ने बताइएको छ । विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेकाले टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थिति आउन सक्ने एसोसिएसनले बताएको छ । यसका साथै, विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
जसको कार्यान्वयन नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएको तार काट्ने, संरचना एवं पूर्वाधार प्रभावित बनाउने लगायतका काम भइरहेको समेत बताइएको छ । ​यीसहित अन्य कारणले यस वर्षको सूचना तथा प्रविधि दिवसमा सहभागी नबन्ने निर्णय गरेको पराजुलीले जानकारी दिए ।